Sihlala siqhathanisa nabanye kwizinto zonke. Ngokukodwa abantu baqhele ukuthelekisa ubudlelwane babo kunye nolwalamano lwezinye izibini. Intsapho yomnye umntu ibonakala ngathi iphelele, ukuphazamiseka komntu okanye uvelwano. Oku kuqhelekileyo. Ngaloo ndlela, sivavanya iindawo zethu kwisilinganiselo sabathandekayo abathandayo, siyafumana iingcamango malunga nendlela abanye abahlala ngayo. Kodwa ubomi bomnye - ubumnyama kunye noko sibona emkhathini, akusoloko kuvela ngaphakathi. Ngoko ke, musa ukukhawuleza ukukopisha ubudlelwane bomntu, kuqala thola ukuba ngubani na ophezu kobudlelwane babo.
Wonke umntu uyazi ukuba iinjongo azizange zenzeke ebomini okanye ngothando. Abanye bavumelanisa ngokucacileyo nale nyaniso kwaye abafuni ukuhambelana neminye imibono yabantu malunga nokuba ubuhlobo obungenakulinganiswa. Abanye bakhuphuka esikhumbeni, kuphela ukudala ukubonakala kwebini elifanelekileyo. Ngamnye wethu udibene nabantu abanjalo ngaphezu kweyodwa. Bathetha ngolwalamano lwabo kunye nala mabali ahluke kwi-pink candy and sweet candy candy, ukusuka kwiifilimu ezingenanto ezingenanto kunye nezothando. Abanaso izihlandlo zokuxabana kunye nomona, isondo sabo sisoloko sisebenza ngomlilo, abahlali bepholile, bahlala bephulaphule, ubomi babo bemihla ngemihla bufana neeholide ephezulu kakhulu yabantu abaqhelekileyo. Akumangalisi ukuba idyll enjalo iphakamisa umona. Kodwa yintoni ekhokelela kule nto?
Ngokuqinisekileyo, ukubonisa iingxaki zabo kuyityala elibi. Zonke iimpikiswano kunye neengxabano zihamba kakuhle ekhaya. Kodwa, ukuba nje uzenza nje ukuba konke kulungile kuwe, emva koko inyaniso iya kubonakala kuwo wonke umntu. Ubusika obonakalisayo, ukudibanisa, ukuxoxwa ngamabali ngolonwabo kwinto enokuba yinkcazo efihla ukunganakwa, amabango athile, ukunganeliseki ngobomi babo.
Musa ukuchitha amanzi.
Kukho izibini eziye zahlangana kunye, azibandakanyi kwangoko. Abathandi abanjalo bahlala, basebenze bahlale kunye. Abakwazi ukucinga uhambo oluya kweholide, ngokuqhelekileyo uhambo oluqhelekileyo kwisitoreli ngaphandle komnye lube yintlekele yangempela kubo. Kuvuyisa ukubukela ubudlelwane babo - abaxhalabisana, nangona bachitha yonke imini kunye. Kodwa ngaphambi kokuba ubuze umthandayo ukuba angashiyi okwesikhashana, cinga malunga nokuba wenza i mpazamo.
Enyanisweni, iibinibini ezinjalo ngokuqhelekileyo azihambeli omnye komnye kungekhona othandweni olukhulu kwaye kungekhona nje kumnqweno wokucinga ngomntu othandekayo. Kwizobudlelwane ezinjalo, kukho ukhokeli ocacileyo kunye nomdlali odlala indima yesibini. Kukho ixesha elininzi elinomona onamandla, okuba sisizathu sokuba kutheni abazithandayo bangabandakanyeli. Ngendlela, eqinisweni, lo lawulo olupheleleyo aluveli kuwo wonke umntu.
Kukho izibini ezithatha ubudlelwane babo kunye nobomi babo. Akunakuphikisana, musa ukubilisa ngomona nangomdla, kwintsebenziswano yabo yonke into ichanekile kwaye iqikelele. Bazama ukuxazulula iingxaki ezinzulu ngokusisigxina, bakhetha isifo sengqondo seentsapho ekubetheni izitya, zihlala zilungelelaniswa kwaye zingalokothi zivumeleke.
Ngaba lo awusona umzekelo wobudlelwane obuhle? Enyanisweni, ulwalamano oluhle kunye nolulondekileyo lungcono, kodwa sonke siza kutshatyalaliswa kungekudala okanye kamva sisithandwa yimvakalelo. Sinokucaphuka okanye sibe nomsindo, sivuya okanye sihlupheke. Ukuba le mivakalelo igxothwe okanye ifihliwe ngokucophelela, ukukhutshwa okufunekayo kuya kwenzeka. Kule meko kuphela, isiqhwithi sinamandla ngakumbi kwaye imiphumo ibaluleke kakhulu.
Ngamanye amaxesha kuyimfuneko ukujonga indlela abanye abatshatileyo benza ngayo izinto ngokwenene. Ezi zipho ezixabisekileyo, iingoma phantsi kwefestile, ukuxolelwa kokuziphatha kakubi kakhulu. Aba bantu baxhamla ngeparachute, bhala iingoma kwaye bavula iinkwenkwezi ezintsha ngenxa yabathandekayo babo. Akunakwenzeka ukuba umona.
Kodwa bambalwa abantu abaqaphela ukuba izipho zokunethezeka zizenzo ezintle, njengokungathi zidalwe ngabalawuli abaphezulu be-melodramas, oku kungumvuzo wenkcitho, ukunganakwa, ukucaphuka. Ixesha eliphilileyo imoto entsha yentombazana yakho inzame ukumnxusa, emva kokuba intanda ethandekayo ayizange ibuyele ekhaya ukuze ilale. Ngaba zonke ezi zinto zihle kunye namazwi aphezulu alawo mava ukuba abathandi abangonwabanga bafumane amava?
Sonke senza iimpazamo. Sinobukhwele, sicaphukile, sithukuthele, sithandabuze, sinyengwe, siphikisana. Ngamanye amaxesha sikulungele ukuphuka, kwaye ngamanye amaxesha asikwazi ukwenza ngaphandle komnye. Konke oku kuqhelekileyo. Kubalulekile ukunyaniseka nathi. Abanye bangaboni ukuba yintoni ekhokelela ekuhambeni kwakho, kodwa kufuneka uqiniseke ukuba olu lwalamano luyanwabile.
Ukufunda ukuxolisa ngeemeko ezihlazo
Kutheni si soyika ukwenza amaphupha agcwaliseke?
Yithemba, kodwa khangela ... njani le nto iphela?
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye rhodochrosite
IHoroscope: i-scorpion, ibhinqa ngo-2010
Ukutolika kwamaphupha: uthini ibhokisi liphupha ngalo
Kutheni ufuna ukuphupha amaphupho angenangqondo?
Ukuthintela umkhuhlane kubhinqa abakhulelweyo
Ifumaneka kwimisebenzi yekhaya yokulahleka komzimba
Indlela yokukhetha inqanawa ezelekileyo yabasetyhini: iingcebiso kunye nokuhlaziywa kwamanqaku anje
Iimpawu: ubulili besini
Uhlobo oluhle kakhulu lwenja yomntwana oneminyaka emine ubudala